Shiinaha iyo Reer Galbeedka oo isugu sii xumaanaya arrinta Hong Kong. - Tilmaan Media
Shiinaha iyo Reer Galbeedka oo isugu sii xumaanaya arrinta Hong Kong.
Waxaa cirka isku sii shareeraya khilaafka dalalka Reer Galbeedka iyo Shiinaha ee ku aadan Isbaddalladii ugu dambeeyay ee kadhacay Hong Kong oo ah gobol katirsan dhulwaynaha Shiinaha lkn haysta ismaamul hoosaad.
Isbaddalladii ugu dambeeyay ayaa dhacay kadib markii dib loo dhigay doorashooyinkii baarlamanka ee lagu waday in ay Hong Kong ka qabsoomaan bisha Sapember ee sanadkaan.
Maamulka Hong kong ayaa ku andacooday in doorashooyinka dib loogu dhigay sababo la xiriira tirda dadka uu kudhacay Koronafayras oo kor ukac samaysay maalmihii ugu dambeeyay.
Kooxaha u ololeeya dimuqraadiyadda ayaa ku eedeeyay dowladda in ay marmarsiiyo kadhiganasyo Koronafayras si aysan doorasho u dhicin.
Dhanka kale Maraykanka ayaa cambaareeyay tallaabada dib loogu dhigay doorashada baarlamanka ee Honkong. Afhayeen u hadashay Aqalka Cad ayaa ayaa sheegtay in tallaabadan qay katahay isku day Shiinuhu ku doonayo in baabi,iyo nidaamka dimuqraadiga ee Hong Kong kajira.
Maraykanka ayaa hadda kahor cunaqabtayno kusoo rogay Shiinaha sababo la xiriira tallaabooyinka ugu dambeeyay ee Shiinuhu ka sameeyay Hong Kong.
Dowladda Jarmalka ayaa iyaduna dhaleecaysay tallaabada dib loogu dhigay doorashooyinka Hong Kong. Jarmalka ayaa joojiyay heshiis kala dhexeeyay Hong Kong oo dhigayay in labada dhinac is waydaarsadaan dadka dambiyada loo haysto.
Shiinaha ayaa dhaleeceeyay tallaabooyinka ay reer galbeedku qaadeen, waxayna dowladdda Shiinuhu ku tilmaantay arin baal marsan shuruucda caalamiga ah iyo inay tahay faragalin lagu samaynayo gudaha dalka Shiinaha.
Khilaafka Maraykanka iyo Shiinaha ayaa sii xumaanayay tan iyo markii Trump noqday madaxwaynaha Maraykanka. Koronafayras ayaa uga sii daray xiriirka labada awoodood.
Xiriirka Maraykanka laleeyahay Shiiinaha wuxuu kamid noqday mawaadiicda looga doodayo ololaha doorasho ee Maraykanka oo bisha November ee sanadkaan kadhici doonto doorashada madaxtinimo.
Puntland: 10 Urur siyaasadeed oo kaqayb gali doonta doorashooyinka Golayaasha Deegaanka 2021.
Galmudug: Xubnaha guddiga farsamo ee doorashooyinka dalka oo lamagacaabay